Ndirhoxisile ukuBika kweWebhusayithi yam ngexabiso kunye nezixhobo zoHlahlelo lweDiib | Martech Zone
Ngengeniso elahlekileyo enxulunyaniswa ne-COVID-19, kuye kwafuneka ndivavanye kwakhona iimveliso endizisebenzisayo ukuphanda, ukubeka iliso, ukunika ingxelo, kunye nokwenza ngcono iisayithi zam kunye nezo zabathengi bam. Ndichitha amakhulu amawaka eedola ngenyanga ngezixhobo ezimbalwa zokwenza oku. Kananjalo, isixhobo ngasinye sasineetoni zeengxelo kunye nokhetho- kodwa kuye kwafuneka ndidibanise idatha ukufumana iingcebiso ezinokusebenziseka endinokuzisebenzisa ukuphucula iisayithi.
Ngamanye amagama, bendibhatala itoni yemali… kwaye ndingazifumani iimpendulo endizifunayo. Ndikhe ndahlekisa ngale nto ngaphambili… ukuba izixhobo zohlalutyo zilungile ngokwenene umbuzo iinjini kwaye hayi impendulo iinjini. Kukuwe njengomhlalutyi ukuchonga kunye nokubeka phambili amathuba emva kokuba umbe kwidatha, icandelo, isihluzo, kunye nokuthelekisa isimilo sabatyeleli.
Ndifuna ukucaca njengoko ndicacisa le mveliso ndiyifumene- diib. Kukho ngokoqobo amawaka ezinto onokuzenza ngewebhusayithi ukuphucula ukubonakala kwayo, ukukhula, kunye nokuguqula. Olunye uhlalutyo luhlala lufuna umntu ukuba aguqulele idatha kwizenzo.
I-Diib: Injini yeempendulo
Le vidiyo isuka diib xa babesungula iminyaka emi-5 eyadlulayo babonelela ngengqondo kwiqonga nendlela elinokukunceda ngayo ishishini lakho:
Ndityikitye simahla diib akhawunti kwaye wachukumiseka kwangoko ngempendulo ekrelekrele esele iqulunqwe liqonga ngaphakathi kwimizuzu yokubhalisa. diib iqala ngokuhlalutya iwebhusayithi yakho kwaye ichonge awona mathuba makhulu okukhulisa ukuthengisa kwakho. UDiib uqhekeza izisombululo ezine eziphambili:
Injini yokuphendula -Isixhobo esinamandla sokuchonga siza kuskena indawo yakho kwaye size nesicwangciso sokukhulisa ngokwezifiso ngokukunika iimpendulo.
Uhlalutyo - diib ayilinganisi idatha nje, bayiguqula ibe ngamaxabiso okwenene edola kwishishini lakho elidlulileyo, langoku nakwixesha elizayo. Unokubona ukuba ufumba njani kwishishini lakho.
Inkqubela yomkhondo -Gcina umkhondo wayo yonke imizamo yakho kunye nokufunda ukuze ubone ukuba ukude kangakanani! Inkqubela phambili oyibonayo, kokukhona uya kuqhubeka!
Ithala leencwadi lokuFunda -Ukuba ungumthengisi-mali ngokwakho, uDiib unazo neengcebiso, izixhobo kunye nezifundo kwizandla zakho. Banelayibrari enkulu ye-1000 yeevidiyo, amanqaku, amaphepha amhlophe kunye neencwadi zeencwadi.
Diib ihambisa uhlalutyo olulula, olunempembelelo ephezulu, ukunika ingxelo, kunye nokubonwayo ukukwazisa ukuba uqhuba njani kwaye uza kwenza ntoni ngokulandelayo. Nge-diib ™ uyazi ixabiso lonyaka lendawo yakho kunye nendlela elisebenza ngayo ishishini lakho kwi-intanethi kwishishini lakho. Kwaye i-diib yenza isicwangciso sokukhula ngokwesiko kubukho beshishini lakho kwi-Intanethi.
Jonga iMpilo yeWebhusayithi yakho
Isentloko kwingxelo kukuqinisekiswa kokuqala ukuba iwebhusayithi yakho isempilweni. Diib yenza oku ngokuhlalutya ezi zinto ziphambili kwiwebhusayithi esempilweni:
Isatifikethi se-SSL: Ungangabinayo indawo ekhuselekileyo okanye isatifikethi se-SSL sakho asifakwanga ngokuchanekileyo. DiibInjini yokuskena iyathandeka xa kuziwa kukhuseleko kwaye iya kukwazisa ukuba zibona naziphi na iimpazamo ezibalulekileyo ngokwaneleyo ukuba zichaphazele ubume bakho okanye zibangele isilumkiso kwisikhangeli somtyeleli.
Isantya seSelfowuni: Injini yeempendulo itshekisha isantya esiphathwayo yonke imihla. Ukuba kukho umba ngesantya sakho esiphathwayo, i Diib uya kukwazisa.
Igunya lendawo / i-Backlinks: Ezi icon zikuxelela ngoku ngeGunya lakho le-Moz Domain kunye nenani elipheleleyo le-backlinks ezalatha kwiwebhusayithi yakho. Unokubona uluhlu lwee-backlink zakho ezibaluleke kakhulu.
I-Facebook / UGoogle Ungqamaniso lweShishini lam: ukuba awuyivumelanisi le mithombo mibini yedatha ibalulekileyo, Diib iya kukwazisa ukuze ungaphoswa ziinjongo ezibalulekileyo kunye nezilumkiso!
Imephu: Olu scan lukuxelela ukuba siyifumene okanye asiyifumananga imephu yendawo yewebhusayithi yakho. Imephu zesayithi zinceda uGoogle kunye nezinye iinjini zokukhangela zirhubuluze kwiwebhusayithi yakho.
Internet: Oku kukuxelela ukuba mangaphi amagama aphambili kwiwebhusayithi yakho ekhompyutheni kuGoogle. Ungabona ukuya kuthi ga kwi-150 yamagama akho aphambili.
Uluhlu lwabamnyama: Le yiwebhusayithi kunye nedilesi ye-IP eskena isixelela ukuba ii-imeyile zakho zisiwe kwiibhokisi zabathengi bakho okanye hayi. Ukuba diib ifumanisa ukuba ii-imeyile zakho zinokuya kwiibhokisi zogaxekile endaweni yeebhokisi zeebhokisi ezinokukwazisa kwaye zikuncede ukulungisa ingxaki.
Ukukhangela, ukuHlala, ukuShukumiseka, kunye neeNjongo zeNgingqi
Nje ukuba ndibeke indawo yam, diib yayiqhagamshelwe kuGoogle Analytics, kuShishino lukaGoogle, nakuFacebook ukubonelela ngophando, intlalontle, iselfowuni kunye nokuqonda kweshishini. Iqonga lazichonga kwangoko ezinye iinjongo zokuba ndiphonononge kunye namanye amakhonkco amakhulu okufunda ukuba:
Diib Uhlalutye ukuqonda kuka-Facebook ukuchonga ukuba amanqaku am aya kuba nefuthe lini na.
Diib ndinobukrelekrele obandibonisa ukuba i-COVID-19 ayichaphazeli ukugcwala kwewebhusayithi yam iphela.
Diib ichonge amakhonkco oqhekeko lwangaphakathi ukuze ndilungise.
Diib ndichonge ezinye izinto ezingasemva ezinokuba yityhefu endinokufuna ukungazichazi.
I-Diib liXabiso eliKhethekileyo
I-Purists iya kuthi izixhobo ezinje azibanzi ngokwaneleyo. Oko kuyinyani kwimimandla emikhulu, entsonkothileyo kumashishini akhuphisana kakhulu. Kodwa uninzi lwamashishini alusebenzi apho bafuna ukujonga yonke inkalo yobukho babo kwi-Intanethi… baxakekile beqhuba amashishini abo.
Ngeendleko zokukhetha ze diib, ixabiso likhulu kakhulu kuninzi lwamaqonga phaya. Ukubeka iliso kwezempilo, ukuxabisa, ukuqikelela, iinjongo kunye nezilumkiso kuya kugcina umnini ndawo ophakathi exakekile ekuhambeni konyaka ukuphucula ukukhula kwewebhusayithi kunye nokukhula kweshishini labo.
Iakhawunti ye-diib yasimahla ibonelela:
Isicwangciso sokuKhula esiMiselweyo -Ukufikelela okulinganiselweyo kwizilumkiso zemihla ngemihla kunye neenjongo ezibonisa indlela yokukhula ngokukhawuleza kwezithuthi kunye nengeniso.
Ukubeka iliso kwiwebhusayithi -Fumana izilumkiso zokuwa okungaqhelekanga kwetrafikhi, i-backlinks eyaphukileyo okanye yogaxekile, imiba yokusebenza, ukhuseleko, okanye uhlaziyo lwe-Google search algorithms! Isilumkiso ngasinye kubandakanya amanyathelo anokulungiswa ukulungisa umba.
Imeyile yomfanekiso okhawulezileyo weveki yonke -Hlala unolwazi ngamathuba okukhula kunye nemiba enokubakho.
Inqaku lemihla ngemihla lezeMpilo I-algorithm ye-diib ye-smart algorithm ijonga imeko yewebhusayithi yakho ngexesha lokwenyani.
ukubeka - thelekisa ukusebenza kwewebhusayithi yakho kwiiwebhusayithi ezifanayo kumzi mveliso wakho.
Iakhawunti ye-diib Pro ixabisa i $ 19.99- $ 29.99 / ngenyanga kuxhomekeke kutrafikhi yewebhusayithi kwaye ibonelela ngayo yonke into ekwiakhawunti yasimahla, kunye noku:
Isicwangciso sokukhula -Ukufikelela ngokupheleleyo kwizilumkiso zemihla ngemihla kunye neenjongo ezibonisa indlela yokukhula ngokukhawuleza kwezithuthi kunye nengeniso.
Ukufikelela kwiiwebhusayithi ezingama-30 -Bona ukuba zonke iiwebhusayithi zakho zisebenza njani kwiscreen esinye.
Uncedo lobuchwephesha nanini na -Ukufikelela simahla kwama-24/7 kwingcali yokukhula ezinikele.
Imidiya yokuncokola -I-diib ibek 'esweni intsebenzo yakho kwaye ikubonelela ngemephu yesiko yokukhulisa eli chaneli libaluleke kangaka.
I-SEO kunye namagama aphambili -Uhlalutyo kunye neziphakamiso zokuphucula ezisekwe kwiprimiyamu yeMoz & Semrush idatha.
Jonga iwebhusayithi yakho yezeMpilo ngoku!
Ukubhengezwa: Siyinxalenye yebhongo diib.
tags: Injini yokuphendulai-covid-19diibUhlalutyo lukaGooglei-google analyticsUGoogle ishishini lamUluhlu olumnyamauhlalutyo lweselfowuniisantya sokuhambakhangela uphandouhlalutyo kwezentlaloSSLukubeka esweni iwebhusayithiukuqinisekiswa kwewebhusayithi